Amakhishi Ngokuqashwa in Accrington, Lancashire
Izindlu in Accrington
Izindlu in Lancashire
Izibunu in Accrington
Izibunu in Lancashire
Amaflethi in Accrington
Amaflethi in Lancashire
1 - 10 ka 128 Uhlu
Ishicilelwe ngu Reeds Rains - Bamber Bridge
Ishicilelwe ngu Eafield Maple
Ishicilelwe ngu H2 Homes
Ishicilelwe ngu Discover Property Management
Ishicilelwe ngu Rossendale Estates
I-Accrington yidolobha elisendaweni yaseHyndburn eLancashire, eNgilandi. Iqhele ngamakhilomitha ayi-6 empumalanga yeBlackburn, ibanga elingamakhilomitha ayi-10 entshonalanga yeBurnley, amamayela ayi-13 (21 km) empumalanga yePreston, amakhilomitha angama-32 enyakatho yedolobha laseManchester futhi isendaweni iningi kugudlwe uMfula iHyndburn. Okuvame ukufingqwa ngabantu bendawo ku- "Accy", leli dolobhana linabantu abangama-35,456 ngokusho kokubalwa kwabantu ngo-2011. I-Accrington yisikhungo sangaphambili sezimboni zikakotini nezendwangu. Leli dolobhana lidume ngokwakha izitini ezinzima kakhulu nezishubile emhlabeni, "i-Accrington NORI" (insimbi), eyayisetshenziswa ekwakhiweni kwe-Kingdom State Building nasekwenzeni izisekelo zeBlackpool Tower; aziwa nge-Accrington Stanley FC neHaworth Art Gallery ephethe iqoqo elikhulu kakhulu lengilazi yeTiffany yaseYurophu.